Yakkamtoonni hidhanuun male OPDO fi ODP kalee PP har’aati malee qabsaa’ota miti – Awash Times
Yakkamtoonni hidhanuun male OPDO fi ODP kalee PP har’aati malee qabsaa’ota miti
March 2, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Qabsaa’ota bilisummaa Oromoof ummata Oromoo kabajamaa osoo hintaane yakkamtootatu hidhamuun male.
Yakkamtonni kuni eenyu isaan?
Sabni saba aadaf duudhaa kan nagaa dhaadhessu qabu. Sirni Gadaa safuu Waaqaf lafaa barsiise. Kanarraa kan ka’e namni nama ajjeesellee nagaa fuulduraatif gadoodhan akka namni wal hinajjeefnef gumaadhan fixata.
Egaa kana laaleti Oromoo DHDUO kaleessa Waayyaannee waliin dhaabbachuudhan ummata keenya waan mirga isaatif qabsaahef qofa hidhaatti guuranii, tuman, ajjeesan, muula muran, akka qotiyyoo kolaasan. Kaan qabeenya saamanii akka maraatu yoo godhan, kaan biyyaa baasan.
Kana caalas lafa Oromoof qeyee Oromoo nama keenya irraa buqqisanii gurguratan. Hamma har’aa dallaalota itti bobbaasanii irraa buqqisanii alagaatti gurguratu.
Egaa sirna nama nyaataa san buqqisuudhaf qabsaa’onni biyya keessaf biyya alaatii walgurmeessudhaan, qeerroo kakaasudhaan gooftolii OPDO gaggeessanii OPDO akka cehumsa hogganu carraa argate.
Miidhaa OPDO eegasii ODP saba keenyarraa gahaa turan osoo hindagatin, yakkamtoota harki dhiigaa osoo hinqulqullaayin sabni Oromoo akka hogganan itti dhiise.
OPDO fi ODP kalee PP har’aa garuu warra safuu beekuu miti. Sabni Oromoo badii isaanii kana beekaa callifnaan ammallee akkuma kalee hidhaafi ajjeesaa jiru.
Silaa yakkamtoonni hidhamuun male PP harki dhiigaa, kan kalees har’as saba keenya fixaa jiran malee qabsaa’ota oolmaa guddaa saba Oromootif oolan miti. Sabni Oromoo PP safuu hinbeekne dura dhaabbatee salphisuuf saaxiluu qaba. Yakka isaanii tarreessee yaadachiisuu qaba.
Previous Post: Hoggantoonni ABO hidhaman tokko malee 4 hiikaman
Next Post: Police Must account for missing Oromo opposition leader Abdi Ragassa says Amnesty International